C/raxmaan C/Shakur”Maxaa kooramka Golaha Shacabka loo la’yahay? -
HomeWararkaC/raxmaan C/Shakur”Maxaa kooramka Golaha Shacabka loo la’yahay?
C/raxmaan C/Shakur”Maxaa kooramka Golaha Shacabka loo la’yahay?
June 25, 2019 F.G Wararka 0
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ka hadlay sababta kooramka loogu la’yahay kulamada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka oo maalmihii la soo dhaafay baaqanayay.
Siyaasi C/raxmaan C/shakuur ayaa su’aal geliyay cida leh mas’uuliyadda Xildhibaanadda iyo Guddoonka, isagoo xusay in Baarlamaanka uu ku dhacay macno iyo miisaan beel, maadaama Goluhu uusan u howlgelin isla xisaabtan
Qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray ayuu cinwaan uga dhigay sidan tan:-
Maxaa kooramka Golaha Shacabka loo la’yahay?
Guddoonkii Golaha shacabka qayladii ayaa ka dhammaatay, siday u lahaayeen kooramkii ma buuxsamin. Haddii ay magacyada xildhibaannadii maqnaa yeeriyeen oo ay guddiga anshaxa u direen, oo ay gunno ayaan ka jaraynaa ugu hanjabeen , welina dheg jalaq looma siin. Baarlamaanka waa hay’adda ugu muhiimsan ee dalka, lafdhabarna u ah dhismaha nabadda & dawladnimada dalkeenna, haatanse waxay u muuqataa in macno iyo miisaan beel ku dhacay. Ma xildhibaannadaa masuuliyadda leh mise guddoonka?
Xildhibaannada haddii aad weeydiso waxey ku leeyihiin maxaa laga qabanayaa meesha mar haddii Golihii uusan ku howl-laneyn isla xisaabtan, hortebin uusan siinaynin hawlihii uddub dhexaadka u ahaa dhismaha nabadda qaranka Soomaaliya, ma Shinbirayoow heesa ayaan halista qaraxa ugu soo bareernaa.
In badan oo xildhibaannada ka mid ah halkii ay kulammada Golaha Shacabka ka qayb geli lahaayeen, waxey aadaan xafiisyada madaxda laanta fulinta ( Madaxweynaha & Raysalwasaaraha) iyo taliyaha Nabadsugidda, si ay danahooda gaarka ah ama kuwo dad ay wakiilo ka yihiin kaga soo fushadaan .
Xildhibaan ayaa igu yiri “waxaan dib u jaleecaa dadaalkii waqti, hanti iyo galaangal ee kursiga xildhibaannimada iiga soo baxay iyo sida xaalku yahay, dadka waxaan dheernahay oo keli ah in aan haysanno kaarar aan jidadka xiran ku marno, xafiisyada xukuumadda ku galno iyo waa xildhibaan hebel nala yiraahdo”
Golaha Shacabku wuxuu macno iyo miisaan yeelanayaa markii loo arko in uu xukuumadda la xisaabtamayo ama uu ku mashquulsan yahay hawlaha hortebinta u leh dhismaha dawladnimada. Gudoonka masuuliyad weyn ayaa ka saaran in ay Golaha kaalintiisii u celiyaan oo ay laanta fulinta ka madax baneeyaan, haddii kale in dhaaxa ah waxay dhihi doonaan, kooram la’aan ayuu kulankii u baaqday.